Saraakiil Turkiga lagu soo tababaray oo Muqdisho ku soo laabatay - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa dib ugu soo noqday saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo in muddo ah tababar ku soo qaadanayay dalka Turkiga.
Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo dhaweeyay saraakiishan tababarka ku soo qaatay dalka Turkiga , wasiirka gaashandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Maxamed Cali, xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidamada.
Wasiirka difaaca Soomaaliya Xassan Maxamed Cali ayaa bogaadiyay dadaalka dowladda Turkiga ay ugu jirto tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
“Waxaan u mahad celiyay Dowladda Turkiga oo dedaal weyn ugu jirta sidii ay Soomaaliya u dhisan lahayd Ciidankeeda, sidoo kale waxaan bogaadinaya dadaalka ay geliyeen dhismaha Ciidanka. Madaxweynaha Dalka Maxamed C/llahi Maxamed iyo Ra’iisulWasaare Xasan Cali Kheyre, wuxuuna sidoo kale ammaanay hammiga Dhalinyarada soo qaadatay tababarka ee ah difaaca Dalkooda Hooyo”ayuu yiri wasiirka gaashandhigga.
Dowladda Turkiga ayaa magaalada Muqdisho ka hirgelisay saldhigyo lagu tababaro ciidamada xoogga dalka.